Archive du 20-sept-2021
Diso firenena sy vahoaka…
“Rehefa tsy mandroso amin'izao i Madagasikara tsy handroso intsony mandrakizay”, hoy ny filoha Andry Rajoelina tao Analavory ny sabotsy lasa teo nandritra ny fitokanana tsena nataony tany an-toerana.
“Coupe de la CAF” Tafita any amin’ny 1/16-dàlana ny CFFA
Tafiakatra amin'ny dingana manaraka ny CFFA andoharanofotsy amin’ny fiadiana ny Amboaran’ny Kaonfederasionina Afrikanina na ny “Coupe de la CAF” ho an’ny taranja baolina kitra.
Saika hifindra monina an-tsokosoko Malagasy 53 indray no tratra tany Mayotte
Kazarana sambo kely na ireny antsoina hoe: Kwassas ireny miisa 6 no tsikaritry ny tafika an-dranomasina tatsy Mayotte ary nosambotin’ny borigady an-dranomasina sy ny polisy mpiaro ny sisin-tany,
Misaona ny zava-kanto sy ny mozika Nodimandry i Sammy Rastafanahy
Nodimandry ny sabotsy 18 septambra 2021 lasa teo ny Mpanakanto Sammy Rastafanahy na Raharisoa Samuel, fantatra tamin’ny anaram-bositra ihany koa hoe “Dollar”,
Federasiona Malagasin’ny ady totohondry Mpitsara sy mpanazatra 41 nahazo fiofanana
Mpitsara sy mpanazatra miisa 41 mirahalahy no nahazo fiofanana teo anivon’ny Federasionan’ny ady totohondry eto Madagasikara ny faran’ny herinandro teo.
Sprinter nivadika teny Amboadiafontsy Zaza iray namoy ny ainy, maro ireo naratra
Nitrangana lozam-pifamoivoizana teny Ambodiafontsy RN1 omaly tolakandro. Fiara sprinter iray no tra-doza niala tamin’ny làlana, lasa tany an-kady, ary nivadika.
Oniversite Hanomboka ny 4 oktobra ny taom-pianarana vaovao
Tontosa ny faran’ny herinandro teo teny amin’ny minisiteran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa teny Tsimbazaza ny fivorian’ireo filohan’ny oniversite sy ny tale jeneralin’ny IST
Famonoana zaza tany Ambositra Olona 4 naiditra am-ponja
Olona 4 no fantatra fa voasambotra ary efa naiditra am-ponja tamin’ny faran’ny herinandro teo tany amin’ny kaominina ambanivohitra Ambositra,
Lalam-pirenena faha-7 Miverina ny fanakanana sy fanafihana taksibrosy
Miverina mahazo vahana any indray ny fanakanan-dalana ataon’ny jiolahy sy ny dahalo any amin’ny làlam-pirenena fahafito na ny RN7.
Resabe manaratsy endrika ny fitondrana Tsy sahy manapa-kevitra ny Filoha
Tsy voavaha ny olana fototra eto amin’ny firenena toy ny resaka asa, sakafo, fandriampahalemana, fahasalamana, fanabeazana izay tadiavin’ny malagasy maro an’isa amin’izao fotoana izao.
Andry Rajoelina Tafiditra any Etazonia na tsy vita vaksiny aza ?
Vao miresaka hoe: fivoahana ny firenena sy fidirana any amin’ny Firenen-dehibe, dia isan’ny mitana ny sain’ny maro ny hoe efa vita vaksiny fanefitry ny Covid 19 ve izany ny Filoha Andry Rajoelina, izay lasa any Etazonia ?
Antananarivo renivohitra sy ny manodidina Gaboraraka ny fety sy kotaba manimba fiarahamonina
Toe-javatra mateti-piseho eny anivon’ny fiaraha-monina ny fanaovana fety izay matetika hisiana kotaba amin’ny endriny maro, zava-maneno tsy hifankahitana, savorovoro, fimamoana,…
Gadra nitsoaka Voatifitra i Ra Pika
Mpanao fanafihana sy mpaka an-keriny nikoizana teto an-dRenivohitra i Ra Pika, raha ny tatitry ny polisim-pirenena.
Silo sy ny fitendrena vatamaroafitsoka Hitondra seho miavaka etsy amin’ny Trinq’île Tsiazotafo
Hiavaka ny fampisehoana entin’ny andrarezin’ny vatamaroafitsoka Malagasy, Silo, etsy amin’ny Trinq’île Tsiazotafo ny alin’ny zoma 24 septambra izao.
Rija Ramanantoanina Eny Morondava - Ambohibao indray no fotoana
Ao amin’ny Le Catagasy Morondava Ambohibao indray no fotoana miaraka amin’I Rija Ramanantoanina sy ireo hiram-pitiavana nahafantarana azy hatramin’izay ny 1 oktobra 2021 izao.
Fampandrosoana ny fizahantany Hasongadina any Amoron’Imania ny kolontsaina Betsileo
Ho fampandrosoana ny fizahantany sy ny tontolo ambanivohitra, ny fikambanana Haikolo kanto, izay misehatra ao anatin’izany dia mikarakara hetsika antsoina hoe “Festival de Mania”